You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Anatomy / သည်းခြေကျောက်
အောက်ဖော်ပြ ပါ ထွက်ဆိုုချက် လေး နဲ့ ပတ်သက် လိုု့
ကျန်းမာရေး ဗဟုုသုုတ တွေ ထပ် ပေး ပါ ဦး မယ် ------
“ ကျတော့် မိန်းမ medical check up လုပ်ရင်း သည်းခြေကျောက်တွေ့ပါတယ်..1.2 cm တစ်လုံးထဲပါ..
ခွဲရမှာလည်း ကြောက်တယ်ဆိုတော့ အင်တာနက်ထဲ လှန်လျောကြည့်ပြီး apple cider ၂ ဇွန်းကို သံပုရာသီးအရည် ၁ ဇွန်း ပျားရည်လေးနဲ့ မနက်စာ မစားခင် နေ့တိုင်းသောက်ပါတယ်.. လေးလလောက် သောက်ပြီး 0.7 cm ထိ သေးသွားပါတယ်.. ဒါနဲ့ နောက် ၂ လ ဆက်သောက် 0.4 cm ထိ သေးသွားပြီး နောက်ပိုင်း သိပ်မသောက်ဖြစ်တော့ပါဘူး..
စကားမစပ် ကျတော်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး ဆရာဝန်များ ဖြစ်ပါတယ်..”
ဒီ နေ ရာ မှာ ကျွန်မ ပြော ပြ ချင် တာ က တော့ ------
သည်းချေ မှာ ကျောက်တည် တယ် ဆိုု ရာ အကျိုး တရား တစ်ခုု ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ အကျိုး တရား ( ကျောက်တည်ခြင်း ကိုု သဘာဝ ပန်းသီး ရှာလကာ ရည် သောက် ခြင်း ဖြင့် သေး သွား ပါ တယ် ) အခုု လိုု သေး သွား ပေ မဲ့ လဲ သည်းခြေ ကျောက်တည် ရ ခြင်း အကြောင်း ကိုု မပြု ပြင် ရ သေး တာ မိုု့ အချိန် မရွေး ပြန် ကြီး လာ နိုုင် တဲ့ အပြင်၊ သည်းခြေအိပ် ထဲ မှ လည်း ထွက် သွား နိုုင် ပါ တယ်။
သည်းခြေ အိပ် ထဲ မှ ထွက် သွား တဲ့ အခါ bile duct မှ သွား ပိတ် နေ တတ် ပြီး ၊ အလွန် နာ တတ် ပါ တယ်။အသားဝါ၊မျက်စေ့ဝါတတ်ပါတယ်။ အဖျား လဲ တက် တတ် ပါ တယ်။ ဆေးရုုံ ကိုု အရေးပေါ် အနေ နဲ့ လဲ ရောက် သွား တတ် ပါ တယ်။ အထူး သဖြင့် အဆီ တွေ စား လိုုက် တဲ့ အခါ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။
အရေးပေါ် အနေ နဲ့ လဲ အခွဲ ခံ ရ တတ် ပါ တယ်။
သည်းခြေ ကျောက်တည် နေ သူ များ အတွက် အကြံ ပြု ချင် ပါ တယ်။
လိုုက်နာ တာ၊ မလိုုက် နာ တာ က တော့ ကိုုယ့် သဘော ဖြစ် ပါ တယ်။
၁. ကျောက် တည် နေ သူ တွေ၊
ကျောက် မရှိ ပဲ အစာစား ပြီး ရင် လေပွ၊ ဗိုုက်ကယ် နေ သူ တွေ၊ အစာ မကြေ ဖြစ် နေ သူ တွေ၊ ဟာ များ သော အား ဖြင့် အစာစား တဲ့ အခါ ( အထူးသဖြင့် အဆီ) သည်းခြေ က အဆီ ကိုု ရှေးဦးစွာ ချေ ပေး နိုုင် တဲ့ သည်းခြေရည် bile ကိုု လုုံလုုံ လောက် လောက် မ ညှစ် ပေး နိုုင် လိုု့ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ လိုု ဖြစ် ရ တဲ့ အကြောင်း ကိုု ပြန် ကြည့် ကြ ရ အောင်။
သည်း ခြေ မှာ ရှိ နေ တဲ့၊ ညှစ် အား ကိုု ပေး တဲ့ ကြွက်သား ( smooth muscle ) တွေ ကြား ထဲ မှာ mucin ဆိုု တဲ့ အချွဲဓာတ် ဝင် ရောက် တဲ့ အခါ ညှစ် အား မ ကောင်း တော့ ပါ။
တဖြေးဖြေး နဲ့ လက်ကျန်တွေ များ လာ ပြီး ပြစ်လဲ ပြစ် လာ၊ အနည် လည်း ထိုုင် လာ ပြီး၊ bile pigment stone , cholesterol stone တိုု့ ဖြစ် လာ ပါ တယ်။
ဒီ လိုု ဖြစ် လာ ရ တဲ့ အဓိက အကြောင်း ရင်း က တော့ Hypothyroidism ဖြစ် ပါ တယ်။ သွေး ဖောက် ကြည့် ရုုံ န ဲ့diagnosis မရ နိုုင် ပါ။ ကျွန်မ ရေး ထား ပေး တာ တွေ ကိုု ပြန် ဖတ် ကြည့် စေ ချင် ပါ တယ်။
Principle က Hypothyroid ဖြစ် နေ တဲ့ လူ များ ဝမ်း ချုပ် သ လိုု ပေါ့။ Mucin ဟာ smooth muscle တွေ ထဲ ကိုု ဝင် လာ ရင် ညှစ်အား မကောင်း တော့ ပါ။
Pathonogmonic feature of hypothyroidism ဟာ Mucin ဖြစ် ပါ တယ် ဆိုု တာ ကျွန်မ တိုု့ ဆေး ကျောင်း မှာ တုုန်း က တည်း က Pathology မှာ သင် ထား ခဲ့ ကြ ပါ တယ်။
အဘိဓမ္မာ နဲ့ ရှင်း ပြ ရ ရင် Mucin ဆိုု တာ အာပေါဓာတ်။ ယိုုစီးခြင်း၊ ဖွဲ့ စည်း ခြင်း ရှိ တယ်။
အာပေါဓာတ် ဟာ အလွန် သိမ်မွေ့ တာ မိုု့ ဖောဋ္ဌပ္ဗာရုုံ ထဲ မှာ မပါ ပါ။
စမ်းကြည့် လိုု့ လဲ မရ ပါ။
ဓမ္မဓာတ် အနေ နဲ့ သာ ဖော် ပြ ထား ပါ တယ်။
သည်းခြေ ကျောက် တည် သူ များ လိုုက် နာ သင့် တဲ့ အချက် များ ကိုု အတိုုချုံး ပြီး ပြော ပြ ရ မယ် ဆိုု ရင် ----
၁. အဆီ ကိုု ချေ ပေး နိုုင် ဖိုု့ Ox bile 500mg ကိုု အစာ များများ စား တိုုင်း သောက် သင့် ပါ တယ်။
အစာ မစား မီ မိနစ် ၂၀- ၃၀ လောက် ကြို သောက် ပါ။
သောက် ခြင်း အား ဖြင့် သည်း ချေ က ညှစ် ပေး စရာ မ လိုု တော့ သော
ကြောင့် သည်း ခြေ အိပ် ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ ကျောက် ထွက် လာ စရာ
အကြောင်း မရှိ တော့ ပါ။
အရေး ပေါ် ဆေး ရုုံ ကိုု လဲ သွား စရာ မလိုု တော့ ပါ။ အရေး ပေါ် ခွဲ စရာ
လည်း မ လိုု တော့ ပါ.
၂. ဒီ လိုု ထိန်း ထား ရင်း နဲ့ သဘာဝ အား ဖြင့် ကျောက် ကျေ သွား ရ
အောင် ပန်းသီး ရှာလကာ ရည် ကိုု ဆက် သောက် ပါ။
၃. ရောဂါ နောက် ထပ် ပြန် မ ဖြစ် ရ အောင် အဓိက အကြောင်း ဖြစ် တဲ့ Hypothyroid ကိုု ပြု ပြင် ပေး လိုုက် ပါ။
မိတ်ဆွေ များ အား လုုံး ကျန်းမာ ချမ်း သာ ကြ ပါ စေ။